Engxenyeni yesibili yekhulu nesishiyagalolunye, kanye ekuqaleni ukwakhiwa Trans-Siberian sesitimela, iRussia yayinabantu isikhungo esisodwa kuphela lapho onjiniyela ngiqeqeshelwe iphrofayela ujantshi, - Petersburg. Ukuntuleka kokukhulumisana Ochwepheshe wazizwa omkhulu, ngakho benza umqondo yokudala isikhungo yesibili imfundo ephakeme ukuthi uzohlangana zonke lezi zidingo. Ufaka isikhungo esisha kwi insimu yalo efana emadolobheni amaningi: Kazan, Kiev, Ekaterinoslav, eVoronezh Saratov. Eagle, kodwa ntandokazi unikwe ngu uMbusi eMoscow, njengoba sekube othisha wezwe engcono. Ngakho lapho MIIT, imicabango yabantu mayelana nokuthi iziphi izinhlelo ethulwa kule athikili.
Le nhlangano yomphakathi ngokuthi Association abaphothule MGUPS (MIIT) kanye elinobunye Imininingwane inkundla yokuxhumana phakathi kwabantu owayefundelwa esikhathini ekolishi esifanayo, ukusebenza ezimbonini ezahlukene ngisho emazweni ahlukahlukene. Kwakulapho, futhi zitholakale University (MIIT) Izibuyekezo yothisha, wenza njengoba iziqu, owahamba esikoleni sakhe esiphakeme, futhi labo bahlala khona ukufundisa.
Ukuxhumana phakathi izizukulwane abaphothule - kwayona buyinto ezithakazelisayo. Lapha, hhayi kuphela yesondlo kobungane nobudlelwane, kodwa futhi ucinge ubambiswano, abaqashi nabasebenzi. Futhi ngenxa yokuthi bonke laba bantu asebethweswe iziqu le nyuvesi, abakwazi abe maqiniso ababevumelana ngawo ukuze izithakazelo. MIIT Izibuyekezo iqoqa ezihlukahlukene, njengazo zonke ezinye izikole, kodwa ahambe kakhulu (ikakhulukazi maqondana ubuhlakani lobuchwepheshe) kuyinto cishe sithathwe ngokuhlanganyelwa. Le nyuvesi sinamandla, nge isiko ocebile an amazing umlando ekhulwini ezimbili.
Imfundo e Ubunginiyela
Amazwana mayelana izinga lemfundo ezokuthutha ehamba phambili University bathi lapho kwakhiwa isikhungo elikhulu imfundo ephakeme, isayensi kanye namasiko, okuyinto silondoloze nokuthuthukisa amagugu eziyisisekelo elidala Russian ezokuthutha inyuvesi. Izinga ucwaningo osetshenziswayo futhi eziyisisekelo kakhulu, ukuqeqeshwa Kwenziwa ukusetshenziswa impumelelo zakamuva, emisha, ubuchwepheshe obusha.
Izimiso imisebenzi zemfundo, ukuphathwa zesayensi, futhi usikompilo nenhlalo MIIT Izibuyekezo futhi ngokuyinhloko zibonisa, njengoba inqubo yokufunda senzeka amasiko best of amanyuvesi yasekhaya. It is ithuthukiswe futhi iqaliswe lwabasebenzi, ezingaba zesayensi kanye yezimboni Russian ujantshi umkhakha.
Izibuyekezo bathi iningi labo sakhiwa imisebenzi okukhethekile. Lokhu kusho into eyodwa kuphela: emasikweni wakudala baqhubeka, Railways Russian ukuthola kanye nabasebenzi, kanye nokwesekwa ngokwesayensi. Isizukulwane yolwazi olusha enqubeni yokufunda senzeka ngokuqhubekayo, inyuvesi lwenteke zonke izigaba imfundo impilo yonke: ukuqeqeshwa, kabusha futhi ukuqeqeshwa kwezinga eliphakeme ledzinga professional ukuthuthukiswa ezingokoqobo.
isayensi Ezokuthutha okuhlanganiswe ngayo uhlelo lwemfundo ngokuvumelana MIIT, ukubuyekezwa zazo othisha ziphezulu ukuze zidinga osolwazi lomhlaba inyuvesi. MIIT isebenza nazo zonke amanyuvesi okuholela zomhlaba ukuthi ahambisana umkhakha, nezinkampani eziningi emhlabeni-class nezinhlangano ezokuthutha.
Inani umfundi umzimba we nyuvesi - abantu abangaba yizinkulungwane ezingu-113 babhaliswa ezinhlelweni ezahlukene. Imfundo ephakeme ngesikhathi esifanayo uthole cishe u-40 eziyinkulungwane, uprofesa isilinganiso. imfundo - abafundi abayizinkulungwane ezingamashumi amabili. Ngo ukwakheka Engineering (amazwana abafundi 'ngakho baningi), ezintathu zezifundiswa: Russian Academy of Transport, Isithuthi Academy of Medicine Russian Academy wezokuThutha.
Ngaphezu kwalokho, i-University yakhiwa nezikhungo ayisishiyagalolunye nangemicabango ezine, kanye College of Medicine isikhungo sokuzivocavoca. Ngezinye izifunda amabili nambili Russia University wavula amagatsha 24, zazo eziyisishiyagalombili ukusebenzisa izinhlelo nangaphezulu futhi secondary education amakhono. Engineering umfundi izibuyekezo yalesi sizathu uthola kusuka yonke indawo, futhi cishe njalo isuke zele.
Ukuqeqeshwa inyuvesi amagatsha awo olwenziwa njalo ezingeni eliphezulu ukuthi akuxhomekile ukukhetha izinhlelo. Imfundo Ephakeme okulungiselelwe amakhono 25, izinkomba 39 (97 amaphrofayli) - kuyinto Bachelor; 19 imigqa izinhlelo degree 45 Master; lapha 15 izinkomba ukulungiswa abasebenzi zesayensi kanye Pedagogical kanye 46 zochwepheshe zabo lapho sebephothulile.
Guest abafundisayo MIIT bathi sokufundela imfundo yisinyathelo neketanga okuqhubekayo, futhi abafundi engcono ukuza University of isakhiwo inyuvesi etholakalayo izikole zamabanga sokufundela, lapho bebehlala khona: baqeqeshelwe amakhono 32, okusho ukuthi izinkomba ezinkulu ayisishiyagalolunye ezinkulu lokhu kuqeqeshwa. Kufanele kuqashelwe ukuthi i-Izibuyekezo MIIT futhi ushiye abasebenzi kanye nezisebenzi abaye abaqeqeshiwe lapha 134 ubuchwepheshe.
Emfundweni yamabanga aphansi kanye
University ukhiqiza onekhono kakhulu abathweswe iziqu emkhakheni wezokuThutha ukwakhiwa ezokuthutha, kuba wokuqala nomkhulu kunabo bonke. Ngaphezu kwalokho, zikhona ochwepheshe abaqeqeshiwe emikhakheni ezezimali, umnotho, amasiko, ukuphathwa, ukukhangisa, ukumaketha, nabanye abaningi. Futhi njalo ukubhekana MIIT - eMoscow. Izibuyekezo amagatsha eziningi nje ngoba eziningi zazo.
Ngaphezu imfundo eyisisekelo, inyuvesi usebenzela emkhakheni wezokuthutha nangalowo DPO - ukuqeqeshwa okwengeziwe sokufundela, lapho izinhlelo 480 isetjenziswa. Kumila ikhanda nyuvesi, kanye nebambisene nabo bajabulela ngonyaka kuze kube ayizinkulungwane 50 ochwepheshe, abaphathi, nezisebenzi emkhakheni wezokuthutha ngoba ukuphinda uqeqesho, kanye nokuthuthukiswa kwamakhono Engineering. Uphenyo abaqashi baye bathola ukuqeqeshwa kwezinga ezinjalo njalo omuhle.
Ukufundisa abasebenzi zabantu 1972, kuhlanganise 1078 ukhetho 329 odokotela. The esiphezulu ziqu zezemfundo is etholwe 62 amakhono kanye 24 izikole iriseshi yaseyunivesithi futhi ube ukuqashelwa lonke ngamazwe. Kudingeka nokuba akhulume iminyango 115 kanye nemikhandlu ocwaningeni eziyisishiyagalombili, avikelekile ngabasebenzi abaqeqeshiwe ngokwesayensi.
MIIT, ukubuyekezwa womsebenzi yesayensi okuyinto ngale udumo, - umnikazi we 162 patent, kuhlanganise nanye - kwezilwandle. imisebenzi yezesayensi lobuchwepheshe izivumelwano ngo-2015 zaba e isamba ruble ayizigidi ezingu-670.
Njengoba isikhungo ehola yesayensi embonini yezokuthutha, Engineering lucwaningo ezihlukahlukene nemisebenzi ezintsha zesayensi. Ezinye ukuthambekela amabili ezikhona:
ubuchwepheshe ukukhiqizwa, ezokuthutha izinhlelo, umsebenzi commercial nezezimboni;
isisetshenziswa esisindisa ubuchwepheshe e izitimela;
Ukutadisha izakhiwo ezokuthutha kanye namabhuloho;
Izinkinga zomnotho e ujantshi yezokuthutha;
ezokuthutha inqubo ukuphepha.
Kusukela 2015 le nyuvesi ngabo "Embonini Innovation Center ukungenisa esikhundleni ubuchwepheshe kwezokuthutha." Yezefundo has edishini ayo yesayensi: kukamagazini i- "Bulletin MIIT," "Umhlaba wezokuThutha", "Isayensi ezokuthutha imishini", eqokomisa zonke izenzakalo ezenzeka esikhathini MIIT.
Izibuyekezo abafundi nonresident eMoscow University dorms ezahlukene izulu nomhlaba. Ngokuvamile amahostela MIIT has eziyisishiyagalombili, futhi kwacaca kusukela ukubuyekezwa, ezine zazo yilezi okudinga ukulungiswa kanye ilungiselelo ngokunethezeka. amahostela amabili mahle, asele ezimbili - i abavamile isimo isilinganiso. Kodwa ukuze uthole indawo akulula kanjalo, ngisho nesakhiwo ungakhululekile. ehostela engxenyeni kahulumeni etholakala endaweni yokuqala, kodwa kuphela labo abaqhubekayo nokuphila kwabo amakhilomitha ayisithupha kusukela eMoscow.
Kukhethwa ikakhulu izicelo etholakele okukhethekile lobuchwepheshe. Labo abahlola mahhala, bangathembela indawo isakhiwo, etholakala emzini Pushkino, kuwufanele ruble 2700 ngenyanga. Kodwa isiyonke, ukubuyekezwa umfundi zokulala MIIT kuhluke kancane kusuka nalabo abachazwa yila abafundi namanye amayunivesithi. Ingqikithi yesisindo, ayefana kakhulu. Control kwabasebenzi emsebenzini anganqamuki uqhutshwa, umkhandlu umfundi usebenzela kuyiphi kahle, imincintiswano zihlelekile, ezemidlalo imincintiswano, kusihlwa, nokunye okuningi. Amagatsha zazinjani yokuhlala umfundi kungcono kakhulu, kodwa eMoscow bekulokhu ophithizelayo kakhulu njalo, futhi abafundi abaningi bakwamanye amanyuvesi abe nezinkinga ezifanayo.